Madaxweynaha DFS Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland oo la filayo in ay kulan ku yeeshaan Jabuuti - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha DFS Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland oo la filayo in ay kulan ku yeeshaan Jabuuti
Madaxweynaha DFS Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland oo la filayo in ay kulan ku yeeshaan Jabuuti
June 13, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland Somaliland. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in ay kulan ku yeeshaan dalka Jabuuti asbuucaan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo kala duwan.
Ajandaha rasmiga ah ee shirka lama oga. Waxaa la filayaa in ay ka qeybgali doonaan wakiilo ka socda Mareykanka, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub.
Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa markoodii ugu horeysay bishii Febaraayo kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Somaliland oo kutaala waqooyiga Soomaaliya ayaa ku dhawaad 30 kahor sheegtay in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale balse wax aqoonsi ah adduunka kama helin tan iyo xilligaas.
Argtida Puntland ee wadahadalada Somaliland
Dowlad goboleedka Puntland ayaa horey u sheegtay in aysan waxba ka jirin wadahadal walba oo lala yeesho maamulka Somaliland haddii aysan iyadu qeyb ka ahayn.
Puntland ayaa ku andacootay in wadahadaladu ay saameyn ku yeelaan doonaan deegaano iyada katirsan sida gobolada Sool iyo Sanaag, kuwaasoo labada maamul ay isku hayaan lahaanshahooda.
Labada maamul ayaa marar badan uu dagaal ku dhexmaray gobolada Sool iyo Sanaag. Dagaalkii ugu dambeeyay ayaa deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ka dhacay sanadkii 2018.
February 12, 2020 Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan kula yeeshay Addis Ababa hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland
Farmaajo oo shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada
Ethiopia dismisses UN call for international observers
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Ethiopia has dismissed a request from the United Nations which will allow international observers to investigate the killing of protesters by security forces during a recent about of anti-government demonstrations. Getachew Reda, [...]
Baarlamaanka Puntland oo meel mariyay golaha wasiiradda cusub
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah meel mariyay golaha wasiiradda cusub oo uu soo magacaabay Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Isniintii. 61 xildhibaan ayaa ogolaatay golaha, saddex ayaa ka aamustay. Waxaa kulanka ka [...]
Tirada dhimashada oo sii kordhaysa kadib duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti
London-(Puntland Mirror) Tirada dadka ku dhintay duufaanta Hurricane Matthew oo ku dhufatay dalka Haiti ayaa korodhay labo maalmood kadib markii dufaan xun ay halkaas ka dhacday. Wakaalada wararka Reuters ayaa ku warantay in tirada dhimashada [...]